Umvelisi kunye noMthengisi weeMveliso zokuThumela, iBevel Gear: AMANDLA ONKE AMANDLA PTE. LTD
R series izixhobo helical reducer
Ukuhanjiswa kwamandla eSingapore kwiPte. Ltd.
I-NMRV-NRV yeYunithi yokuNcitshiswa kwesantya seWorm
Ukudityaniswa kweentshulube Gear Gear
R107 / RF107 / RS107 / RF107 series helical gear reducer has the features of versatility strong, indibaniselwano elungileyo kunye namandla okuphatha amandla. Inezinto eziluncedo zokuhambisa ngokulula umlinganiso, ukusebenza ngokukuko okuphezulu, ukungcangcazela okuncinci kunye nomthwalo omkhulu weradial shaft. Olu luhlu alunakusetyenziswa kuphela ngokudibeneyo kunye neezinciphisi ezahlukeneyo kunye neebhokisi zegiya ukuhlangabezana neemfuno, kodwa zikwalungiselela ukwenziwa kwasendaweni kwezixhobo zeebhokisi zegiya.
Uyilo lweemodyuli eziphezulu.
Igobolondo lokuphosa elihambelanayo linobungakanani be-compact, umthwalo omkhulu wokuthwala umthwalo, ukuhambisa okuzinzileyo kunye nengxolo ephantsi.
Ukusebenza okuhle kokulwa nokuvuza, ukutywinwa kakuhle, kunokusetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yoshishino.
Ukonga iindleko kunye neendleko zokugcina eziphantsi.
Sikwabonelela ngomgangatho ogqwesileyo wokurhuqa ikhonkco. Ezi mveliso zinakho ngokwaneleyo ukuphatha umthwalo onzima kwaye zisetyenziswe kumacandelo ohlukeneyo emizi-mveliso. Zonke ezi mveliso ziveliswa ngokusebenzisa eyona mveliso ikrwada esemgangathweni kwaye iyafumaneka kwiinkcukacha ezininzi kubathengi bethu abahloniphekileyo. Abathengi bethu abaxabisekileyo banokufumana ezi mveliso kwelona xabiso lihle lwamaxabiso. Singumvelisi kunye noMthengisi otyhidiweyo owaziwayo kwaye siqinisekisa ukuba itsheyini lethu lokurhuqa liyabhetyebhetye ekusebenziseni kwaye kulula ukudibanisa.
Ngaba ujonge oyena mvelisi kunye nomthengisi weemveliso zothumelo lwamandla? Ukho kwindawo efanelekileyo. Ukusasazeka kwamandla ePte. Ltd ngomnye wabathengisi abaphambili bemveliso yokuhambisa amandla eTshayina. Sinikeza uluhlu olubanzi lweemveliso zothumelo ngokweemfuno zabathengi ezinje nge-sprocket yetyathanga, ibhanti, ipleyiti, igiya, i-rack, i-gearbox, iimoto, kunye nezinye iimveliso ezininzi zokuhambisa amandla. Imibuzo ye-OEM yamkelekile singenza iimfuno ezizodwa zamalungu: i-chain sprocket, ibhanti, i-pulley, i-gear, i-rack, i-gearbox, i-motor, kunye nezinye iimveliso zokuhambisa amandla. Imibuzo ye-OEM yamkelekile ukuba sikwazi ukwenza iindawo ezizodwa…
Ukusasazeka kwamandla ePte. Ltd.yinkokeli kushishino loyilo kunye nobunjineli beentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zokuhambisa amandla. Ukusebenza ngaphezulu kweminyaka emininzi, sinesidima esomeleleyo kolu shishino kwaye sinikezela ngemigangatho ephezulu yeemveliso zothumelo ezisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela. Sisoloko sisebenzisa ubuchwephesha bobuchwephesha kunye nezixhobo ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu eziqinisekisa ukusebenza kakuhle nokusebenza ngokukuko. Imibuzo ye-OEM yamkelekile ukuba siyakwazi ukwenza iimfuno ezizodwa zamalungu: i-chain sprocket, ibhanti, i-pulley, i-gear, i-rack, i-gearbox, i-motor, kunye nezinye iimveliso zokuhambisa amandla. Imibuzo ye-OEM nayo…
Njengomvelisi ohamba phambili wokuhambisa izinto kunye noMthengisi, ngokuqinisekileyo siyinjineli yeTyhuthi yokuhambisa enomgangatho ophezulu ngokusebenzisa itekhnoloji kunye noomatshini ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Ngokugqitywa okukhulu, uyilo olugqwesileyo, ukugcinwa okuncinci, ukuhlala ixesha elide kunye nobuchule obuphezulu, sinikezela ngeyona ndlela yokuhambisa ikona ikwaziyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Konke ufuna nje ukuba iqela lethu leengcali lazi malunga neenkcukacha zakho, siya kwenza okufanayo. Uluhlu lwamashishini asebenzisa imixokelelwane yethu yokuhambisa efana nesamente, iswekile, isichumiso, imithwalo, ukulungiswa kokutya, igesi kunye neoyile, kunye nemizi mveliso yokuphatha izinto.
Uphi imveliso yakho ithunyelwa kumazwe angaphandle?
AIimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa eJapan, eUnited States, eJamani, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Abathengi bethu baquka abathengi abaninzi be-OEM abagxile koomatshini bokwakha. Sisebenzisane neenkampani ezininzi ze-Fortune 500 ukuze zibe ngomnye wabathengisi bazo base China.
Ukubonelela njani ngempahla?
ANgokwesiqhelo siya kuthumela iimpahla elwandle. Umzi-mveliso umalunga neekhilomitha ezingama-460 ukusuka kwizibuko. Kulula kakhulu kwaye kulula ukuhambisa iimpahla kulo naliphi na ilizwe. Ewe, ukuba umthwalo wakho ungxamisekile kakhulu, isikhululo senqwelomoya saseNingbo kunye nesikhululo senqwelomoya saseShanghai nazo zikufuphi.
Uqinisekisa njani ukuba umgangatho weemveliso zakho?
AOkokuqala, siza kujonga emva kwenkqubo nganye. Iimveliso ezigqityiweyo, ngokweemfuno zabathengi kunye nemigangatho yamanye amazwe.
Inkampani igxile ekuveliseni i-R series helical gear hard reducer surface, S series helical gear worm reducer, F series parallel shaft helical gear reducer, K series helical bevel gear reducer, T series helical bevel gear gear steering, H, B series high- amandla ibhokisi yemizi-mveliso, ivili le-SWL yentshulube kunye ne-screw elevator, i-ZLYJ series extruder. Ibhokisi yegiya ekhethekileyo enzima, u-G uthotho lwee-gear zokunciphisa izixhobo, i-P series gear reducer, i-ZDY series cylindrical bevel gear reducer kwaye ingaphezulu kweshumi uthotho, amakhulu eemodeli, amawaka ezinto ezichaziweyo zeemveliso, kunye nokubonelela ngoyilo lwemveliso engekho semgangathweni kunye ulwenziwo. Kwangelo xesha, uyilo lokudibanisa iimodyuli luyamkelwa ukwenza imveliso inoluhlu olubanzi lokusebenziseka ukuhlangabezana neemfuno zesicelo ezahlukeneyo.